Ukuthengisa okungagunyaziswanga, zeziphi iingxaki iinkampani zorhwebo ekufuneka zithathele ingqalelo! -Iindaba zeNkampani-Hunan Zhonggu Science and Technology Co., Ltd.
Ukuthengisa okungagunyaziswanga, zeziphi iingxaki iinkampani zorhwebo ekufuneka zithathele ingqalelo!
I-Nongfu Spring, i-Wahaha, Ufuna ukufuna, uManyano, i-Master Kong, i-Family Convenience, i-Jingkelong, i-Good Shop, kunye necandelo lokuthengisa elingenamntu namhlanje, xa kuthelekiswa neminyaka ebandayo yeminyaka edlulileyo, sele igcwele kuyo yonke indawo, kunye noncedo oluninzi lokubonelela ngezixhobo kunye nezixhobo zejelo . Iinkampani zebranti zingene kwintengiso, ethe yazisa izikhombisi ezahlukeneyo kumzi mveliso. Kwelinye icala, ikwabangele ukuba imakethi iqale ukucinga ngakumbi malunga nokuba amashishini e-brand anokuhambisa njani iivenkile ezingagunyaziswanga.
Ngawaphi amanqaku aphambili okusasazwa ngokuzimeleyo kwamajelo okuthengisa angakhathalelwanga amashishini e-brand?
Inqaku loku-1: Iindleko zesiphelo kunye nokuBuya
Iindleko kunye nembuyekezo sisihloko sikanaphakade nakweliphi na ishishini. Nangona ukuthengisa okungagunyaziswanga kunezibonelelo ezithile kwimithombo yabasebenzi kunye nerenti, indleko zokuhanjiswa okukhulu koomatshini bokuthengisa, izikhongozeli ezinengqiqo okanye iivenkile ezilula ezingenabantu zisephezulu ngenxa yenqanaba langoku lophuhliso lobuchwephesha bokuthengisa obungenamntu. Ke ngoko, ngelixa kungekho majelo okuthengisa afumanekayo kumashishini ophawu, kufuneka benze umsebenzi olungileyo weendleko ezinobunkunkqele kwaye babuyele ukubala, bangangxami ngokungakhathali batyale imali kwiintsiba zenkukhu kwindawo yokugqibela.
Inqaku lesi-2: Nika ingqalelo kubudlelwane phakathi kweempawu zorhwebo kunye neemfuno zabathengi
Kuba imeko yokusetyenziswa, ukuqonda kunye nemikhwa yamaqela aphambili abathengi itshintshile kakhulu, amashishini e-brand kufuneka aqwalasele ngokupheleleyo ubudlelwane phakathi kweempawu zabo zorhwebo kunye neemfuno zabathengi xa behambisa ishishini lokuthengisa elizimeleyo ngokuzimeleyo. Ubude bomgca wemveliso, ukuqina kwemveliso, iimpawu zobudala bemveliso kunye nezinye izinto ezinokuchaphazela ukusebenza kwejelo kwishishini lokwenyani. Amashishini e-Brand kufuneka athathe abathengi njengeziko kwaye ahambelane nezinto ezinokuhlangabezana neemfuno zamaqela aphambili abathengi.
Inqaku eliphambili 3: Ukwakhiwa kweNkqubo yoLawulo lweShishini
Inkqubo yolawulo lweshishini eneneni inamanqanaba amabini, elinye lolawulo lwangaphakathi, olunye lolawulo lwejelo. Nangona inqanaba elikrelekrele leetheminali zentengiso ezingenamntu liphezulu kakhulu, ngokwamava asebenzayo, ngaphakathi nangaphandle isidingo sokuchitha amandla amaninzi ukumisela inkqubo yolawulo ehambelanayo. Ngaphakathi njengenkqubo yokusebenza, yangaphandle njengolawulo lwejelo, anti-ukuhlangana, ukugcinwa kwempahla njalo njalo. Ijelo lokuthengisa elingenamntu lijelo elitsha elinamandla amakhulu kunye nokwahluka. Inkqubo yolawulo yejelo elitsha akufuneki igcine kuphela ubuchwephesha obutsha, kodwa ikhusele nocwangco lomjelo kunye nokuphuhlisa ishishini. Ke ngoko, kumashishini amaninzi e-brand, ukujamelana nejelo elinje lilithuba kwaye ngumceli mngeni.
Ngaphambili: Oomatshini abathengisa abangaqhelekanga abangama-30 emhlabeni, wakha wayisebenzisa loo nto?
Okulandelayo: Ikamva lomatshini wokuthengisa ongalindelwanga